Par Taratra sur 29/06/2016
Hanampy antsika hanodina tsikafonkafona ho taozavatra ny Indonezianina. Nivoitra izany tamin’ny fanaovam-beloman’ny ambasadoron’ity firenena ity, Artanto Salmoen Wargadinata, ny filoha Rajaonarimampianina, omaly teny Iavoloha. Hohamafisina ny fiaraha-miasa, toy ny fambolena soja ; ny fanofanana sy fampitaovana izany. Hotohizana ny vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra malagasy sy ny fanofanana ny teknisianin’ny BNGRC.
Mbola mitaky ny sezany eo anivon’ny FFM ireo gadra politika (Fedep). Nambaran’ny mpitarika, Rakotomalala Henri, omaly fa tokony hahazo ny galonan’ny jeneraly koa ireo kolonely, nigadra. « Nahazo izany grady izany ny Kly Andriamaholison Richard ka tokony hotazonina izany », hoy izy. Tokony ho 40 mahery koa ireo mpikamban’ny FFM ka anisan’ny hanendry izany ny gadra politika.
Nivoaka ny gazety boky Politikà, tantanan’ny Friederch Ebert Stiftung (Fes). Mivoaka indroa isam-bolana izy io ary manome vahana ny resaka politika amin’ny ankapobeny. Eo koa anefa ny lafiny toekarena sy ny kolontsaina ary ny fanabeazana. Amin’ny teny frantsay ranoray ity gazety boky ity ary ahitana pejy 40 mahery. Niampy iray indray izany ny gazety boky eto amintsika.